Tsy mila manam-pahaizana SEO ianao! | Martech Zone
Tsy mila manam-pahaizana SEO ianao!
Talata, Janoary 20, 2009 Zoma, Oktobra 17, 2014 Douglas Karr
Teo… nolazaiko izany! Nolazaiko izany satria hitako ny vola rehetra lany amin'ny fanatsarana motera fikarohana ataon'ny orinasa kely ka hatramin'ny antonony ary heveriko fa raketa. Ity ny fahitako ny indostrian'ny fanatsarana ny motera fikarohana:
Ny ankamaroan'ny Search Engine Optimization dia tafiditra ao anatiny manoratra atiny lehibe, manintona manam-pahefana backlinks ny fa atiny ary fanarahana fanao tsara indrindra vitsivitsy. Ireto misy fotokevitra rehetra azon'ny rehetra arahana - fa ny ankamaroany kosa tsy manaraka izany.
Mbola mahita tranokala vaovao mamely ny tsena mavesatra sy maivana amin'ny lahatsoratra aho, izay tsy mampiasa singa tsotra toy ny lohateny, lohateny, sns… ary aza asiana sitemap tsotra azon'ny motera fikarohana. Ireto torohevitra ireto izay nosoratako matetika tao amin'ny bilaogiko ary ho hitako hatrany hatrany amin'ny bilaogy hafa dia hahatonga ny tranokalanao 99% amin'ny lalana.
Ny zava-misy dia izao: Raha manoratra atiny mifandraika matetika ianao izay mampiditra teny lakile sy andian-teny tadiavin'ny mpikaroka dia ho hita ny tranokalanao. Ny vokatr'izany atiny izany dia sahozanina izay fikajiana bitan'ny manam-pahaizana SEO rehetra. Atsaharo ny fandanianao vola ary manomboka manoratra atiny!
Betsaka ny olona tia miady hevitra momba ny tsiambaratelon'ny motera fikarohana amin'ny zavatra toy ny halavan'ny URL, rohy ivelany, nofollow, sns, sns… saingy ao anatin'ny 1% ihany no lalaovin'izy ireo. Azo antoka, ho an'ny orinasa sasany, io 1% kely io dia mety ho ny fahasamihafana amin'ny dolara an-tapitrisany… fa ho anao sy ho ahy, ny bunk.
Ny tsiambaratelo iray hafa amin'ny indostria dia ny 99.99% amin'ny fifaninanana tsy anananao fantatry ny zavatra ataony. Manorata atiny mahaliana sy maharesy lahatra ary afaka mandresy ny ady amin'ny fikarohana ianao.
Tags: Content MarketingDIYAtaovy izanyahoana no atao seony fomba fanatsarana ny fikarohanafikarohana OptimizationSEOseo consultantseo manam-pahaizana
Avelao amin'izay ataonao ny fonenanao
Jan 20, 2009 ao amin'ny 2: 10 AM
Lehibe. Mazava be ny fanazavanao fa na ny manam-pahaizana aza toa tsy mitovy hevitra. Manantena aho fa hanazava zavatra hafa manan-danja mitovy amin'izany.
Jan 20, 2009 ao amin'ny 8: 37 AM
Miombon-kevitra amin'ny fahatsapanao aho fa ny hena sy ovy (atiny) dia zava-dehibe kokoa noho ny gravy (fanatsarana ny SEO), saingy manontany tena aho raha mamporisika anao tsy hiasa saina momba ny SEO mihitsy ianao…
Namaky teny amin'ny Internet aho fa misy zavatra tokony hataon'ireo bilaogera hanatsarana ny lahatsoratr'izy ireo, toy ny fividianana teny lakile miorina amin'ny fangatahana ary avy eo hafafiny io teny lakile io mandritra ny fotoana farafahakeliny X fa tsy ny XX intsony, sns.
Mahatsapa ve ianao fa mbola mila atao, sa tokony hodinganintsika izy io ary hifantoka amin'ny fanoratana ho an'ny tranonkala semantisika fotsiny?
Jan 20, 2009 ao amin'ny 8: 46 AM
Mila manaraka ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny SEO. Manana pejy noforonina tsara, manana tranokala mampiasa fitaovana toy ny sitemap mba hanehoana ny motera fikarohana izay hijerena sy izay zava-dehibe, sns.
Betsaka ny olona, ​​indrindra ny "manam-pahaizana" SEO miady hevitra momba ny nuances ny SEO fa tsy manoro fotsiny ny mpanjifany mitady sehatra tsara… ary manoratra eo aminy. Ny rafi-pitantanana atiny tsara dia hampiditra ny fomba fanao tsara indrindra ilaina, na manana plugins / add-on maromaro izay hanampy.
Betsaka ny orinasa kely ka hatramin'ny antonony no mandany fotoana sy vola amin'ny 1% fa tsy miasa any amin'izay tena mety hanam-bola!
Jan 20, 2009 ao amin'ny 9: 31 AM
Chris, tsy misy raikipohy manokana X-fotoana. Sarotra kokoa noho io ary ny SEO za-draharaha tsy miraharaha ny fahaizan'ny teny lakile fa tokony ho azonao antoka ny mampiasa fehezan-teny sy ny endriny manan-danja amin'ireo lahatsoratrao.
Ilaina ihany koa ny fisafidianana teny fanalahidy malaza sy lasibatra be indrindra nefa heveriko fa tafiditra ao anatin'ny ampahany "atiny" amin'ilay sary tao amin'ny lahatsoratr'i Doug izany, fa tsy ny faritra SEO Expert. Raha ny SEO dia ao anatin'ny paikadinao fanaovana bilaogy dia zava-dehibe tokoa ny fisafidianana teny lakile.
20 Jan 2009 amin'ny 4:39 PM
Marina i James - izany indrindra no tiako holazaina amin'ny fanoratana atiny mifandraika amin'izany. Tsy mila manam-pahaizana fotsiny ianao hanatanterahana izany.
Jan 20, 2009 ao amin'ny 9: 28 AM
Amin'ny maha "manam-pahaizana" SEO ahy dia tsy maintsy manao hevitra eto aho. Raha mitady "widget" ao amin'ny Google ianao izao dia misy valiny 128,000,000 XNUMX XNUMX.
10 ihany no aseho amin'ny pejy voalohany ary 1 ihany no eo amin'ny toerana voalohany. Io 10 io dia ambany lavitra noho ny 1% amin'ny valiny.
Na dia ohatra tafahoatra aza ity, ary na dia ekeko aza ny hevitry ny lahatsoratr'i Doug, dia tadidio fa amin'ny indostrian'ny fifaninanana dia ny 1% Doug eludes matetika no mety maha samy hafa ny toerana ambony na ny pejy faha-3. Ary ho voninahitr'i Doug dia nilaza izy fa mety misy izany indraindray, mijoro ho an'ny rahalahiko SEO kely fotsiny aho 🙂 <- ho an'i Doug Thesis, ao anaty vazivazy
Ny atiny sy ny backlinks no fototry ny SEO. Mifantoha amin'izy ireo mandra-pahatongaronao tanteraka ny fahombiazany.
Jan 20, 2009 ao amin'ny 10: 01 AM
Misaotra nanoratra an'ity - mahafinaritra ny mahita indostria mangarahara milaza hoe "tsy mila manam-pahaizana ianao" raha miteny avy amin'ny seza manam-pahaizana. Eny, asa mafy io, fa izay ihany no ilaina.
Jan 20, 2009 ao amin'ny 10: 15 AM
Tsy mitovy hevitra aminao aho. Miasa amin'ny SEO aho ary asa tiako io. SEO dia lafiny iray lehibe amin'ny fampandrosoana tranonkala izay tsy azo odian-tsy hita. Ny olana dia matetika, dia odian-tsy hita izy io noho ny famolavolana manintona sy ny tsy fampiharana azy.
Jerevo toy izao. Tsy te hieritreritra momba ny SEO ny orinasa. Aleon'izy ireo mandoa olon-kafa hieritreritra an'izany ary hahazoana antoka fa manao izany tsara izy ireo. Toy ny aleon'izy ireo mandoa olon-kafa hieritreritra famolavolana. Ny olana lehibe dia ny tsy fiheveran'ny ankamaroan'ny mpamorona ny SEO.
Fa maninona no misy olona mandoa ny sehatra bilaogy Compendium, nefa misy safidy maimaim-poana marobe ihany koa? Tsy dia ilaina loatra ny manipy WordPress amin'ny mpizara irery ary manomboka mitoraka bilaogy. Saingy mandoa anao ny olona noho ny fahaizanao, ary izany no andoavan'ny orinasa azy rehefa mividy consultation SEO izy ireo.
Tsy hiady hevitra aho fa misy be ny SEO izay tena tsy mahalala na inona na inona any, fa hahita izany amin'ny sehatra rehetra ianao. Ny zava-misy dia, fantatro ny SEO ary manao ny asa tsara indrindra vitako ho an'ny mpanjifa.
Noho izany, mila manam-pahaizana momba ny SEO ny orinasa, raha tsy tehirizina hianatra momba ny SEO izy ireo.
20 Jan 2009 amin'ny 4:43 PM
Jonathan - Heveriko fa milaza ny raharaha eto amiko ianao! Ny antony itiavan'ny olona hametraka ny bilaoginy amin'ny lampihazo toa ny Compendium dia mba tsy hanahy momba ny SEO izy ireo!
Mino aho fa misy orinasa sasany izay miady amin'ny top 4 ary milaza aho fa misy 1% (na latsaka) izay tokony hifandray amin'ny manam-pahaizana SEO hanampy azy ireo.
Ny lahatsoratro dia tena momba ny orinasa antonony… ny ankamaroan'izy ireo dia mila mitady sehatra tsara izay mampiasa fanao tsara indrindra SEO, manoratra atiny mifandraika ary manery azy hisarika ny saina. Tsy mila 'manam-pahaizana' izany.
20 Jan 2009 amin'ny 4:34 PM
Raha tsy hoe 100% natokana ho an'ny fanatsarana motera fikarohana ianao dia mila manakarama SEO. Tsotra ny teôria fitadiavana motera fikarohana fa ny fametrahana tranonkala iray kosa dia mitaky asa sy fahalalana be dia be.
20 Jan 2009 amin'ny 10:19 PM
Lahatsoratra tsara! Novakiako nandritra ny fotoana lava ny bilaoginao mba hahalalako fa mankafy fiverenana miverina tsara ianao, ka izao no mandeha:
Mieritreritra aho fa mijaly amin'ny "fanozon'ny fahalalana" ianao. Ny ozona fahalalana dia mahazatra ny olona teknika (ory koa aho), ary hitranga rehefa manadino ny tahaka ny tamin'ny voalohany izy ireo rehefa tsy nahalala na inona na inona.
Ny olona manana tranokala orinasa kely dia mila mahalala zavatra maro raha manantena ny hahomby amin'ny motera fikarohana izy ireo.
Fantatrao daholo ny momba ny SEO rehefa nanamboatra an'ity tranonkala ity ianao, saingy efa elaela izay ary izao dia sarotra ny mahatadidy ireo zavatra nianaranao rehetra teny an-dalana.
Ity misy ohatra iray monja amin'ny zavatra iray izay nianaranao "tamin'ny asa" tamin'ny tranokalanao:
Rehefa nifindra ny tranokalanao avy
Ity hetsika ity dia mitaky anao:
Mametraka sy mahatakatra ireo fitaovana Google Analytics sy webmaster (ho azo antoka fa nifindra ny rohy, ary koa ny trafic),
Mampiasà fanovana 301 (ao aminao rakitra .htaccess)
Mamorona rakitra robots.txt (ny anao tsy misy dikany fa tsy ny toerana misy anao)
Halaviro ny atiny duplicate sy ny olana fanonona kanonika
… Sy zavatra maro hafa eny an-dalana.
Ny fivezivezena ny tranokalanao dia tsy ho andraikitra tsotra ho an'ny tsy manam-pahaizana ary tadidio fa izany dia ohatra iray fotsiny amin'ny fampahalalana mahasoa izay azonao teny an-dalana!
Miorina tsara ianao amin'ny teny toy ny "teknolojia marketing" satria manoratra tsara ianao, ary satria fantatrao betsaka momba ny SEO.
Ka raha mbola ampidirinay amin'ny "Fampiharana tsara indrindra" ireo lafiny ara-teknikan'ny SEO ireo dia manaiky tanteraka aho.
20 Jan 2009 amin'ny 11:27 PM
Busted! Fantatrao tsara aho, Pat!
Marina fa tena manintona sy manitsy ny tranokalako ho an'ny SEO aho. Na izany aza, ny tiako holazaina etsy ambony dia tsy tena mikendry ahy fa mikendry ny orinasa salantsalany hivoaka amin'ny Internet. Mi-tweak aho ary mi-tweak ary mi-tweak amin'ny ankapobeny satria somary geek aho.
Raha ny marina rehetra dia mety nanao fahavoazana bebe kokoa noho ny tsara aho nandritra ny fotoana lava.
Lazaina ny marina, nanaiky ihany koa aho fa raha nikendry ny votoatiko tsara kokoa aho, ary angamba, nanangana bilaogy marobe - fa hahazo fifantohana bebe kokoa aho. Votoaty mifandraika, atiny matetika… mandresy isaky ny mandeha.
Misaotra tamin'ny hevitra tsara!
Jan 21, 2009 ao amin'ny 3: 55 AM
Naratrao teo amin'ny lohany indray ny fantsika. Miharatsy hatrany ny olana eo amin'ny sehatry ny orinasa kely ka hatramin'ny antonony satria kely ny fahalalan'izy ireo momba ny tranonkala sy ny tranokala ary voatery miankina amin'ny mpanolo-tsaina mihitsy izy ireo no manoratra sy mampiditra ny atiny ho azy ireo. Izy ireo dia eo am-pamindrampon'ireo consultant amin'ny tranonkala ary manosika ny SEO sy ny orinasa kely hividy izany izy ireo. Ny ankamaroan'ireto consultants ireto izay manangana tranokala ho azy ireo dia tsy iza fa ireo mpamorona izay liana amin'ny fijerena ny kanto an'ity tranonkala ity satria izany no fomba fisainany sy izay takany.
21 Jan 2009 amin'ny 4:54 PM
Doug, ny fanambaranao "Manorata atiny mahaliana sy maharesy ary afaka mandresy ny ady amin'ny fikarohana ianao" dia ara-bola. Ny lesona nianarako: misafidiana lohahevitra iray mahaliana anao, manorata matetika ary ampifandraiso amin'ny hafa. Rehefa afaka herintaona mahery kely dia manomboka miasa izy io. Eny eny, ary ny calculeran'ny Tuned In dia nanampy be. -Michael
Jan 27, 2009 ao amin'ny 8: 26 AM
Marina ny anao fa ny fahombiazan'ny tranonkala iray amin'ny fanekena ny hetting dia azo omena amin'ny atiny sy ny backlinks. Na izany aza, tsy azonao atao ny manary ny manam-pahaizana SEO tanteraka. Ilay zavatra nantsoin'izy ireo hoe manam-pahaizana SEO dia fantany izay tokony hatao amin'ny tranokalanao mba hahatonga azy io hipetraka amin'ny laharana voalohany amin'ny google.